Khubarada Semalt waxay soo bandhigayaan Siyaabaha lagu falanqeeyo waxqabadkaaga Seo ee kujira Console Google Search Console
Waxaad iskudayeysaa inaad gaarto TOP, laakiin ma awoodid? Macaamiisha ma heli karaan goobtaada? Imtixaan, falanqee oo hel jawaabta adoo adeegsanaya aaladaha falanqaynta webka ee Semalt . Qalabka Hubinta Meelaynta ee Keyword wuxuu soo bandhigayaa qiimeynta barta bogagga natiijooyinka mashiinka raadinta Google wuxuuna soo jeediyaa ereyada furaha ee dhiirrigelinta bartilmaameedka.
Soo ogow waxa ay dadku raadinayaan oo u sheeg waxa ay u baahan yihiin. Hubi darajooyinka aad la tartantaan, muuji sirta guushooda oo u isticmaal aqoontaan cusub kobcintaada internetka. Abuuri warbixinno faahfaahsan oo ku saabsan khaladaadka la saxay iyo qiimeynta la wanaajiyey ee falanqaynta markii aad u baahatid. Noqo websaydhka shabakada oo aad maal gasho bartaada internetka.
Adeegso aaladda Semalt si aad u hubiso meelaynta ereyada furaha iyo Falanqiyaha Webka si aad ula socotid isbeddelada:
Hubi qiimeynta boggaaga
Kusoo bandhig muuqaalkeeda shabakadda
Baadh goobaha lagu tartamayo
Aqoonso khaladaadka kobcinta boggiiba
Hesho warbixinno ku saabsan meelaynta shabakadda oo faahfaahsan
Falanqeeyayaasha websaydhadeena waa aaladaha falanqaynta xirfadleyda ee mulkiilayaasha websaydhada u furaya fursado cusub oo lagula socon karo suuqa, jagooyinkaaga iyo kuwa tartamayaashaada iyo sidoo kale falanqaynta ganacsiga ee la fahmi karo.
Maxaad ugu baahan tahay?
Xakameynta jagooyinka bartaada
Ku guuleysiga booska saxda ah ee Google waxay noqotay aag dagaal oo loogu talagalay suuqgeynta internetka. Tani waa meesha qayb weyn oo ka mid ah istaraatiijiyadaada tooska ah ee khadka tooska ah loo taliyo. Sidaas awgeed, waa muhiim, in la kormeero horumarkaaga ama guuldarradiinu.
Waxay kuu oggolaaneysaa inaad hesho sawir buuxa oo ku saabsan halka ay shirkaddaadu ka taagan tahay suuqa. Xogta lafagurista waxay kaa caawineysaa inaad muujiso qodobbada muhiimka ah ee howlahaaga mustaqbalka: waxaad boggaaga ka buuxisaa waxyaabaha ku saleysan keywords saxda ah, soo iibso / isdhaafso xiriiryada ku saleysan ereyada muhiimka ah, iwm.
Xakamee boosaska tartamayaashaada
Baaritaan qoto dheer iyo falanqeyn tartamayaashaada ayaa ah cunsurrada ugu muhiimsan ee falanqaynta suuqa oo dhameystiran. Falanqaynta tartanku waxay kuu ogolaaneysaa inaad qiimeyso awooda iyo daciifnimada tartamayaasha suuqaaga iyo inaad hirgeliso istiraatiijiyado wax ku ool ah oo lagu hagaajinayo faa'iidadaada tartanka.
Semalt wuxuu kugu hagi doonaa adiga oo maraya geedi socod falanqayn tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ah, kaa caawinaya inaad garato tartamayaashaada, go’aamiso oo aad u miisaanto sifooyinkooda, qiimeyso awoodooda iyo daciifnimadooda, oo aad ku hesho himilooyinkooda iyo istiraatiijiyadooda qeybtaada suuqa.
Falanqaynta Semalt waxay daaha ka qaadi doontaa dhammaan faahfaahinta halka ay tartamayaashu ka taagan yihiin suuqa. U adeegsiga macluumaadkan wax ku ool ah waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku guuleysato mashiinka raadinta kobcinta, dallacsiinta iyo ololayaasha xayeysiinta.
Soo saarista suuqyo cusub
Haysashada istiraatiijiyad iibsi macmiil oo adag iyo helitaanka suuqyo cusub ayaa ah shey muhiim u ah shirkad kasta. La'aanteed, waxaad ku adkaan doontaa inaad ganacsigaaga ku kobciso qaab macno leh. Taasi waxay tidhi, mid ka mid ah qaybaha ugu adag ee kobcinta ganacsiga ayaa ah go'aaminta kan ugu sii waara ee soo jiidashada suuqyada cusub.
Macluumaadka laga helo falanqaynta ganacsigaaga ayaa fursado cusub u siinaya qaybinta badeecadaha iyo adeegyada iyo horumarinta sumcaddaada wadamada la cayimay, sidaas darteed waxay ku kallifaysaa shirkaddaada inay tixgeliso astaamaha la xiriira gobollada, iwm.
U beddelashada xogta PDF iyo Excel
Muhiimadda hawshani looma qiyaasi karo soo bandhigida macaamiisha iyo maamulka. Waxaad haysataa fursad qaas ah oo aad ku abuuri karto warbixinno calaamad-cad oo u gudbi dhinacyada saddexaad astaantaada.
Falanqaynta Semalt waxaa ka mid ah
Furayaasha la soo jeediyay
Waxaan kaa caawinaynaa inaad xulato ereyada furaha ganacsi ee ugu habboon.
Looma baahna qalab dheeri ah eray raadinta. Qaado ereyada muhiimka ah ee tartamayaasha, macluumaad qoto dheer oo ku saabsan PPC iyo SEO, xogta Google iyo tiknolojiyadayada gaarka ah. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad uga tagto maamulka khabiirada Semalt.
Muuqaal iyo falanqee mowduuca ereyada furahaaga sida ku habboon waqtiga. Falanqaynta mawduuca keyword waa geeddi-socodka cilmi-baarista iyo falanqaynta shuruudaha raadinta dhabta ah ee isticmaalayaasha internetka ay ku galaan mashiinnada raadinta.
Macluumaadka aad ka heli karto ku saabsan ereyadan raadinta dhabta ah waxay kaa caawin karaan inaad ogeysiiso istaraatiijiyadaada nuxurka, iyo sidoo kale istiraatiijiyadaada suuq geynta ballaaran.
Maxay muhiim u tahay cilmi baarista ereyga?
Inbadan oo ka sii badan, waxaan maqalnaa sida ay SEO isu beddeshay 10-kii sano ee la soo dhaafay, iyo sida keywords laftooda ay u noqdeen awooda aan u leenahay si fiican ugu kala sareeya raadinta ay dadku maalin walba sameeyaan.
La socodka maalinlaha ah ee mawqifyada boggaaga ee nidaamka mashiinka raadinta.
Daraasad iyo falanqayn ku saabsan meelaynta mashiinnada raadintaada.
Muuqaalka astaantaada ayaa ahmiyad weyn leh, maadaama 77% rajooyinka ay si madaxbanaan kuu raadinayaan.
Waa erey cabsi leh oo loogu talagalay fikradda fudud. Astaantaadu waa wajiga shirkaddaada. Ciyaarta ku dheji, dadkana waxaa ku adkaan karta inay ku gartaan. Ka dhig mid joogto ah, waxaadna dhawaan dhisi doontaa sumcad wanaagsan.
Iyo xakamaynta aqoonsigaaga shirkaddu uma fiicna macaamiishaada oo keliya. Sida saxda ah ee loo shaqeeyay, kontoroolka sumadda ayaa kaa badbaadin kara waqti badan, adoo aan u sheegin welwelka.
Macluumaadkaan lafa-gurista ah ayaa muujinaya heerkaaga caanka ah, kaasoo kuu oggolaanaya inaad horumariso siyaasad iskaashi oo karti leh.
Falanqayn dhameystiran oo ku saabsan waafaqsanaanta boggaaga ee horumarinta bogga iyo shuruudaha wershadaha SEO.
Hantidhawrka SEO-ka ee tooska ah | Falanqaynta SEO
Mashiinnada raadinta waxay adeegsadaan dhowr arrimood si ay u meeleeyaan bog. Falanqeeyaha Websaydhku waa aaladda hubinta ee SEO-ga oo baarta arrimahan iyo inbadan. Waxay kaa caawineysaa inaad soo aragto dhibaatooyin carqaladeyn kara darajada boggaaga. Adoo sameynaya xisaab hubin goobta SEO ah oo faahfaahsan, aaladdeenu waxay ku siineysaa dulmar guud ee xogtaada barta SEO-ga, sida calaamadaha Meta, Google SERP guudmar, mareegta, Robots.txt iyo tirokoob kale oo muhiim ah.
Falanqaynta Gaadiidka Websaydhada | Hubinta Gaadidka Websaydhada
Qeybtaan aaladda xisaabta websaydhka, waxaad ku sameyn kartaa falanqayn dhameystiran oo ku saabsan taraafikada websaydhka oo aad ka ogaan karto heerka adduunka ee websaydhkaaga. Waxaas oo dhan oo leh cabbirro muhiim ah sida heerka soo-saarka boggaga internetka. Waxaad u adeegsan kartaa cabbiraadaha xogtan si aad ugu sii qorsheysato istaraatiijiyadaha websaydhkaaga intan ka sii badan.
Sidee bay u shaqaysaa?
Kadib diiwaangelinta boggayaga, waxaad bilaabeysaa nidaamka xog aruurinta falanqaynta oo waxaad heleysaa warbixin faahfaahsan oo ku saabsan jagooyinka websaydhkaaga iyo kuwa kula tartamaya, iyo sidoo kale addeecidda boggaaga ee dhismaha goobta iyo heerarka warshadaha SEO. Haddii aad horey u koonto leedahay, waxaad had iyo jeer ku dari kartaa mashruuc cusub (websaydh) bartaada shaqsiyeed, sidoo kale waxaa lagu falanqayn doonaa nidaamka.
Intii lagu guda jiray falanqaynta bartaada, nidaamkeenu wuxuu soosaaraa ereyo-fure (keywords) kaasoo dhaliya iibka iyo booqashooyinka ku saleysan nuxurka iyo meta magaca = '' keywords '' xogta laga helay falanqaynta bartaada internetka. Waad ku dari kartaa ereyada furahaaga ah ama meeshaad ka saari karto ereyada furaha ah wakhti kasta.
Aag kasta oo heer qaran ah oo u oggolaanaya raadinta khadka tooska ah luuqadda aad dooratay waxaa ku shaqeeya 338 matoorada raadinta Google. Dhamaan matoorradaani waxay go'aaminayaan darajada boggaaga Semalt.
Taasi waa sababta Semalt ay kugula talineyso adeegsiga dhowr matoorada raadinta ee falanqaynta bartaada. Waxaad dooran kartaa matoorada raadinta badan ee falanqaynta websaydhka aad rabto.
Maalin kasta, waxaan falanqeynaa mawqifyada goobta waxaanan raacnaa horumarkooda. Intaa waxaa sii dheer, waxaan soo aruurinaa macluumaad ku saabsan tartamayaashaada (haddii aad go'aansato inaad kormeerto boggooda).
Si ka duwan bogagga kale, waxaan si joogto ah u cusbooneysiinaa jagooyinkaaga, kaasoo ku siinaya fursad qaas ah oo aad kula socon karto jagooyinka boggaaga internetka waqti kasta oo maalinta ah oo aad aragto isbeddelada ugu dambeeyay.
Waxaad helaysaa miirayaal badan oo shaqadaada ka dhigi doona mid sahlan oo kaa caawin doona inaad go'aan ka gaarto guusha mashaariicdaada.
Waad u kaydsan kartaa ereyada furahaaga si aad ula socoto qaybta gaarka ah ee ganacsigaaga oo aad u qaadato qoraallo waxtar leh oo lagu soo bandhigi doono aaladda macluumaadka ku xirnaana taariikh gaar ah.
Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa nidaamka API. Hada waxaa jira habab dhowr ah oo macluumaadka lagu wareejiyo. Qaybta agabyada saddexaad ayaa ah tan ugu wanaagsan. Tan dambe waa mid aad u habboon maxaa yeelay xogtu si otomaatig ah ayey u wada shaqeyneysaa, taasoo u oggolaaneysa dadka isticmaala inay arkaan macluumaadka cusbooneysiinta. Wax dadaal ah looma baahna dhinacaaga. Had iyo jeer waad ka daawan kartaa xogta ugu cusub ee gorfaynta macluumaadka meel kasta oo la doortay.
Dhammaan falanqaynta waxaa lagu soo bandhigayaa warbixin falanqayn faahfaahsan oo loo beddelay qaab PDF ama CSV (White Label & Semalt Label) qaab aad uga soo degsan karto websaydhkeenna.
Warbixinta ayaa waliba loo diri karaa cinwaanka e-maylka ee la tilmaamay, iyada oo ku xidhan inta jeer ee la doortay. Tani waxay si wanaagsan ugu beddeli kartaa aragtidaada iyo sidoo kale u soo bandhigista isbeddelada horumarkaaga dhinac saddexaad.
Maareeyahaaga shaqsiyeed ayaa mas'uul ka ah la socodka horumarkaaga waxaana loo heli karaa wada tashi ama su'aalo wakhti kasta. Waxaad kula xiriiri kartaa kooxdeena markaad ku habboon tahay.
FG: Haddaad joojiso dallacsiinta SEO, dhammaan dib-u-xiriirinta waa laga saari doonaa, Google-na ayaga ka saari doona keydkiisa dhowr bilood gudahood. Xitaa haddii darajooyinka aad ku guuleysatay intii lagu jiray ololaha SEO ay tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ugujiid ah.
Haddii aad waligaa lahaan jirtay ama aad maamuli jirtay shabakad, waa inaad aad uga taxadartaa ereyga Raadinta Raadinta Raadinta (SEO) oo waliba aad maqashay / isticmaashay mid ka mid ah aaladda SEO. SEO waxay ku daraysaa robotyada Google ee yimaada bartaada waxayna u guurguuraan tusaha. Iyada oo ku saleysan algorithms -keeda, haddii Google u aragto in xogtaadu tahay mid sax ah oo la hubo, bartaada internetka ayaa dhowaan ku qiimeyn doonta Google. Waa tan sida falanqaynta websaydhka Google.
Kireystayaashu waxay baarayaan waxa ka kooban websaydhkaaga oo ay ku diiwaangeliyaan xogta xogtooda oo ay darajayn degelkaaga ka dib markii ay falanqeeyaan.
Waxay u adeegsadaan SEO si ay u go'aamiyaan inta taraafikada websaydhka ee aad heli doontid iyo waxa xawaaraha deg deg ama bogga uu yahay. Tani waa sababta ay muhiimka u tahay in lala socdo SEO-gaaga. Waana tan waxa qalabyada falanqaynta ee websaydhku kaa caawinayaan inaad sameyso.